Arabia Saodita: Tolona Hanavotana Ireo Gadra Notànana Tsy Nisy Fitsaràna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Jona 2012 1:14 GMT
Vakio amin'ny teny Català, Español, Français, Aymara, English
Inoana ny fanjakàn'i Arabia Saodita fa manana gadra an'arivony izay tsy navela niatrika fitsaràna ary maro amin'izy ireo no tsy mahalala akory ny antony nanamelohana azy. Niasa mafy ny fianakavian'ireo gadra ireo nandritra ny volana vitsy farany teo, tamin'ny alalan'ny fampitam-baovao sosialy, mba hampitàna ny vaovao ary farany dia nanapa-kevitra ny hanao fitakiana an-dalàm-be. @e3teqal, kaonty iray ao amin'ny Twitter, dia namoaka vaovao momba ny fitakiana talohan'ny nanombohany mba hisorohana ny fisianà mpitandro filaminana maro dia maro.
Andro vitsy talohan'ny tolona, namoaka ity fanasàna ity io kaonty io izay mampiseho kisarisarin'ireo gadra tamin'ny fomba nanehoana ireo gadra Palestiniana tanatinà fanentanana vao haingana tamin'ny fampielezam-baovao sosialy:
Namoaka sary manamafy ny fandraisan'anjaran'ny zanak'ireo gadra tamin'ny tolona ihany koa io kaonty io: Tany amin'ny toeram-pivarotana goavana tany Sahara any amin'ny renivohitr'i Riyadh no natao ny tolona, dia nisy iray hafa tany amin'ny faritr'i Al-Qasim. Indreto misy sary vitsivitsy mampiseho ny tolona tany Riyadh, avy amin'ilay kaonty Twitter voatonona tetsy ambony ihany: Ity sarin'ny tolona tany Al-Qasim ity koa dia navoakan'i e3teqal:
Lahatsary maromaro avy amin'ilay tolona no navoakan'i islamicps07 tao amin'ny YouTube. Indreto misy roa tamin'ireny:
Vakio koa: Arabia Saodita: “Avotsory ireo gadranay na tsarao ry zareo!” [eng]